၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိသင့် ဦး နှောက်သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြန်လည်သက်ဝင်လာသည်
မည်သည့် porn ကိုမဆိုမကြည့်ပါနှင့် ဘာမှမ ထာဝရ
သင်၏အတွေးများထဲသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောမည်သည့်သရုပ်ဖော်ပုံများမဆိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ပြီးအောက်ပါတို့ကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ သင့်အဘို့ထူးဆန်းသောအရပ်ကိုပြင်ဆင်ကြပြီ။ စမ်းချောင်းတစ်ခုတွင်၊ တောင်ပေါ်တွင်၊ ဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအာကာသထဲတွင်ငါးဖမ်းခြင်း၊ ပန်းခြံခုံတန်းရှည်ပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အိန္ဒိယ Indianapolis ၅၀၀ တွင်ကားမောင်းခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ပထမ - ဤခေါ်ဆောင်သွားသောမြင်ကွင်းသည် ပို၍ သေးငယ်သော၊ အာကာသထဲကိုအနည်းငယ်အစက်အပြောက်ရောက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ဒုတိယအ: ကသင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးရူပါရုံကိုဖြည်သည်အထိဝေးကနေ, ပိုမိုနီးကပ်စွာ, တောက်ပခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်လောင်အတွက်အသစ်ရဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုယူခဲ့။
[အခြား rewiring နည်းစနစ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Rewiring နှင့် ဒီမှာ.]
လျစ်လျူ အဖျက်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောအတွေးများကိုဆန့်ကျင်ပထမကာကွယ်ရေးပြည့်စုံလျစ်လျူဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခွင့်ကိုသူတို့ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းမှာသူတို့ကိုပယ်ဦးရန်ကျန်းမာရေးနှင့်အများဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုံးဝသူတို့ကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ဤအကျူးကျော်သူတွေကနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလမ်းဖွင့်ဘယ်တော့မှမ။ သူတို့နှင့်သိလိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ဒါဟာနည်းဗျူဟာအမှားပါ ခင်ဗျားထက်ပိုပြီးလိမ္မာပါးနပ်တဲ့ရန်သူနဲ့စကားစမြည်ပြောတာပါပဲ။ အကယ်လို့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တဲ့အတွေးတစ်ခုကိုသင်အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်၊ သင်၏စိတ်ကိုပိုမိုကျယ်လောင်။ ကျယ်လောင်သောဆူညံသံများဖြင့်စတင်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်တ ဦး တည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာမှာ၎င်းကိုလုံးဝလျစ်လျူရှုရန်ဖြစ်သည်။ သူပြောတာကိုဒါမှမဟုတ်ဘာလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာကိုမအာရုံစိုက်ပါနဲ့။
ငါကလူအချို့ရဲ့ဘလော့ဂ်များကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူလာအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ပြန်စမှုတစ်ခုထပ်မံမပြုလုပ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကလေးဘဝ၌ကစားရန်အသုံးပြုသော 'Super Mario' ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုစဉ်းစားသည်။ ပြန်ဖွင့်တာနဲ့တူတယ်။ သငျသညျဂိမ်းလိုပဲသင်ကစားသည့်အခါတိုင်းအဆင့်တစ်ခုတက်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အဆင့် ၈ ရှိမီးတွင်းထဲသို့ရောက်သွားပါကသင်သည်အဆင့် ၁ သို့ပြန်မသွားပါ။ သင်သည်အဆင့် ၈ တွင်ထပ်မံစတင်ပါသည်။ ဘာဖြစ်သလဲ? သငျသညျတပတ်လုံးသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပတ်အတွင်းလူရှုပ် - ချွတ်ခဲ့ပါဘူး။ ယခုပင်လျှင်, သင်သည်အခြားအဆင့်တွင်ဖြစ်ကြသည်။ နေ့စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများသည်၎င်းတို့သည်ဂိမ်းထဲတွင်မပါ ၀ င်သည်ကိုပင်မသိကြပါ။ ငါဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမတွေ့မချင်းငရဲမတက်ဘူးသေချာတယ်။ မင်းတွေ့ပြီဆိုရင်၊ ဂိမ်း (မင်းရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေး) ကမင်းရဲ့ဘဝကိုပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့နေ့ကစပြီး။ ဘယ်တော့မှပြန်လည်စတင်မှာမဟုတ်ပါဘူး သင်ပြန်ပေါ်လာတိုင်းသင်ထပ်မံမစပါ။ နေ့တိုင်းမင်းဟာပိုပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်။ မင်းရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုပြောင်းလဲပစ်ပါ။ သင့်ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်။
အကောင်းအဆိုး cons များစာရင်းကို Make:
P ကိုကြည့်ဆက်လက်ရန် Pros:
P ကိုကြည့်ဆက်လက်ရန် Cons:
- ငါ agoraphobic ရ
မိန်းကလေးများနှင့်အဆင်ပြေစွာပရောပရည် လုပ်၍ မရပါ
–၄ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေရုံနှင့်လေးရက်ခန့်ကြာအောင်ပစ်ထားလိုက်သည်။ လေးရက်သည်ရက်များစွာဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် ၄ င်းတို့ဆက်ပေါင်းနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဖြုန်းတီးသောနေ့ရက်များ။
– ငါစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်ဓာတ်ကျပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့စဉ်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကရှိခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်ထံသို့ပြန်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအဆင့်ကိုကျော်ပြီးကျော်ဖြတ်သင့်သည်
- ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်နှင့် dopamine receptors တို့ကိုထလိုက်သည်
P ကိုရှောင်ဖို့ Pros:
- ငါအရာအားလုံးကိုသူတို့ကိုနည်းစနစ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အချိန်မှာမရှိတဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းအားတစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါ relapse မှာအနုပညာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်၊ ငါဟာလှုပ်ရှားမှုကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်။ ငါ့ swagger ဆိုရင်) အပေါ်, အနုပညာအချို့ pizazz နှင့်အတူလုပ်ဖြစ်ပါတယ်)
–In အသစ်သောအရာများကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ် ပို၍ ကျရောက်တတ်သည်
–၃ ကျွန်ုပ်ဘဝကို ပို၍ နှစ်သက်သည်။ (ဥပမာအားဖြင့်၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အနုပညာအချို့ကိုကျွန်တော်မျက်ရည်ကျမိလိမ့်မည်။ သို့သော်ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏မကောင်းသောခံစားချက်များ မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမဆို)
– လောကကိုပုန်းရှောင်စရာမလို၊ ငါအဲဒီမှာပါနိုင်တယ်
- ကျွန်ုပ် ဦး နှောက်ကိုအားဖြည့်ပေးပြီး dopamine receptors အချို့ကိုပြန်လည်ပေးသည်
- ကျွန်ုပ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်သူတစ် ဦး ကဲ့သို့ခံစားရသည်
P ကိုရှောင်ဖို့ Cons:
သင်တို့သည်လည်းတွေ့ပါစေခြင်းငှါ ဤဆောင်းပါးတွင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။